Ngokuba n = 10 ukuya n = 11
Kuzo zonke iinguqu ezikhethiweyo zeengqungquthela, enye yeyona nto ibaluleke kakhulu ngenxa yezicelo zayo yinto eguquguqukayo engafaniyo. Ukusabalalisa okungafaniyo, okunika amathuba okubaluleka kohlobo oluguquguqukayo, lugqitywe ngokupheleleyo ngamapalitha amabini: n ne- p. Apha nani inani lezilingo kunye nokuba kunokwenzeka ukuphumelela kweso silingo. Iitheyibhile ezingezantsi zi- n = 10 kunye ne-11. Amanqanaba kuwo onke ajikelezwe kwiindawo ezintathu zokugqibela.
Sifanele sihlale sibuza ukuba isasazisi esisodwa sifanele sisetyenziswe . Ukuze sisebenzise ukusabalalisa okungundoqo, simele sihlole kwaye sibone ukuba ezi zilandelayo zifezekiswe:
Sinesibalo esipheleleyo semiboniso okanye izilingo.
Isiphumo sokufundisa isilingo sinokuhlulwa njengesiphumo okanye ukungaphumeleli.
Ubungakanani bempumelelo buhlala buhlala.
Iimbono zizimeleyo omnye komnye.
Ukunikezwa okuyingqamaniso kunika ithuba lokuphumelela kwi-test ye totali yeesilingo ezizimeleyo, ngasinye sinakho ukuphumelela p . Amanqanaba abalwa ngolu hlobo C ( n , r ) p r (1 - p ) n- r apho C ( n , r ) yindlela yokudibanisa .
Itafile ihlelwe ngamanani e- p ne- r. Kukho itafile ehlukileyo kwixabiso ngalinye le- n.
Kwezinye iitafile zokusabalalisa ezinobuninzi sinalo n = 2 ukuya ku-6 , n = 7 ukuya ku-9 Kwiimeko apho i- np ne- n (1 - p ) zikhulu kunokuba zilingana no-10, sinokusebenzisa ukulinganisa okuqhelekileyo ukusabalalisa okungafaniyo .
Kule meko ukulinganisa kukuhle kakhulu, kwaye akudingi ukubala kwee-coefficients binomi. Oku kunika inzuzo enkulu kuba ezi zibalo ezinobunzima zingabandakanyeka.
Umzekelo olandelayo kwi-genetics iya kubonisa indlela yokusebenzisa itafile. Masithi ukuba siyazi ukuba inzala iya kuba nefapi ezimbini ze-gene gene (kwaye ke iphetha ngohlobo olugqithisileyo) yi-1/4.
Sifuna ukubala ukuba kungenzeka ukuba inani elithile labantwana kwintsapho elungu elineshumi linalo mfanelo. Makheka X ibe inani labantwana abanalo mpawu. Sibheke kwitheyibhile ye- n = 10 kunye nekholamu nge- p = 0.25, kwaye ubone ikholam elandelayo:
Oku kuthetha umzekelo wethu
P (X = 0) = 5.6%, yinto enokwenzeka ukuba akukho namnye wabantwana abanomlinganiselo ogqithiseleyo.
P (X = 1) = 18.8%, okungenzeka ukuba omnye wabantwana unomlinganiselo ogqithiseleyo.
P (X = 2) = 28.2%, yinto enokwenzeka ukuba ababini babantwana banomlinganiselo ogqithiseleyo.
P (X = 3) = 25.0%, yinto enokwenzeka ukuba abathathu kubantwana banomlinganiselo ogqithiseleyo.
P (X = 4) = 14.6%, okungenzeka ukuba abane abantwana banomlinganiselo ogqithiseleyo.
P (X = 5) = 5.8%, yintoni enokwenzeka ukuba abantwana abahlanu banomlinganiselo ogqithiseleyo.
P (X = 6) = 1.6%, yintoni enokwenzeka ukuba abantwana abathandathu banomlinganiselo ogqithiseleyo.
P (X = 7) = 0.3%, yinto enokwenzeka ukuba ezisixhenxe zabantwana zinomlinganiselo ogqithiseleyo.
Iifayile ze-n = 10 ukuya n = 11
Umthandazo Wenjabulo: 'Kwangathi INkosi Ingakubusisa kwaye Yigcine'